Yonwabela ukuhlala okutofotofo kwiNtlambo yeTeme emangalisayo
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguLouise
Ikhaya losapho olonwabisayo elinomoya owamkelekileyo, oneembono ezintle ezijonge iTeme Valley entle.
Ifama yaseCamp ibonelela ngegumbi elikhulu lokulala elitofotofo elinesibini elinebhedi ye-Super King okanye iibhedi ezingamawele amabini, ezibekwe ecaleni kwe-annexe yendlu, efikelelekayo ngezinyuko zayo ukusuka ekhitshini lendlu yasefama.
Kukho igumbi lokuhlambela labucala elinebhafu kunye neshawa.
Ukuhamba okugqwesileyo kwasekhaya kunye nokuhamba ngebhayisekile kwaye kusekwe ngokugqibeleleyo ekujongeni iingingqi zaseWorcestershire, Herefordshire kunye neShropshire.
Igumbi lifudumele kwaye lipholile kwaye lineefestile kumacala amathathu, ibonelela ngokukhanya okuninzi kwendalo. Kukho iimbono ezibalaseleyo kuyo yonke iTeme Valley entle, efikelela kude njengeShropshire Clee Hill kunye neentaba zaseWelsh ngosuku olucacileyo. Ihonjiswe ngendlela ekhululekileyo yale mihla, kusetyenziswa ifenitshala epeyintiweyo yelizwe.
Igumbi lokulala linezibane ezi-3 eziphambili kunye nezibane ezisecaleni kwebhedi kwicala ngalinye lebhedi. Itotshi encinci nayo inikwa.
Amashiti kunye namagquma e-duvet onke yi-100% yomqhaphu kwaye iiduvethi zintsiba zedada ezitofotofo naphantsi. Ligumbi elithandekayo elifudumeleyo eBusika, elinobushushu obulawulwayo kwaye buhlengahlengiswa, kodwa iingubo ezongezelelweyo kunye nebhotile yamanzi ashushu ziyafumaneka ukuba ziyafuneka.
Igumbi linomabonwakude, i-alamu yerediyo yedijithali kunye nokufikelela kwi-intanethi engenazingcingo. Uya kufumana nesomisi seenwele kunye nesipili se-makeup esifubeni sedrowa. I-ayina kunye nebhodi yoku-ayina ziyafumaneka xa ziceliwe. Kukho isitulo esitofotofo, ngamaxesha athile kunye nedesika yokubhala / itafile yokunxiba.
Kukho itreyi yeziselo eneketile, izitya kunye neeglasi. Sinikezela ngokukhetha iziselo ezibandakanya iindidi zeti, ikofu ekhawulezileyo kunye nesihluzo, iswekile, itshokolethi eshushu, amanzi asele emineral kunye neebhiskithi.
Igumbi lokuhlambela linebhafu enkulu enezandla kunye neshawa yamandla ebekwe ngaphezulu. Sibonelela ngeetawuli ezimfumamfuma, amalaphu obuso, isepha, ishampu, i-conditioner, ishawa kunye nejeli yokuhlambela, iwash yezandla kunye nelotion yezandla kunye neyomzimba.
I-annexe iyatshixwa ngaphakathi kuphela kwaye iindwendwe zibonelelwa ngesitshixo kucango lwangaphandle lwekhitshi.
Ifama yenkampu ayitshayi kuyo yonke indawo.
Isidlo sakusasa sinikezelwa phakathi kwe-08:00 kunye ne-09:00. Isidlo sakusasa saseCamp Farm sibandakanya ukukhetha ukutya okuziinkozo, iyogathi, ithowusti kunye nokugcinwa, isaladi yeziqhamo ezitsha kunye neziselo ezibandayo nezishushu.
Ibekwe kwindawo ephakamileyo ejonge iTeme Valley entle, sineembono ezintle onokuthi uzibuze kwaye zisekwe ngokugqibeleleyo ekujongeni amabala eWorcestershire, Herefordshire kunye neShropshire.
Sinethamsanqa elaneleyo lokuba siye sawongwa ngeziqinisekiso ezithi 'abahambi bamkelekile' kwaye 'abakhweli beebhayisikile bamkelekile' kwaye banokubonelela ngezibonelelo zayo yomibini le misebenzi. Ifama yaseCamp yindawo entle yokuhamba kwaye inxalenye yomhlaba wethu yenza umgama wendlela yeenyawo edumileyo ye-'Worcestershire Way'- ke akukho sizathu sokungahambi-kusemnyango wakho!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Great Witley